मधेस केन्द्रित दल आफ्नै ठाउँमा किन भए कमजोर ? - Himalaya Television
मधेस केन्द्रित दल आफ्नै ठाउँमा किन भए कमजोर ?
२०७९ जेठ ११ गते १३:२१
११ जेठ २०७९ लहान । मधेस प्रदेशको सिरहामा मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा सिरहामा मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को अवस्था कमजोर बनेको छ ।